Fitaovana 8 ho an'ny fikarohana ara-barotra influencer mifandraika amin'ny niche anao | Martech Zone
Fitaovana 8 ho an'ny fikarohana momba ny varotra influencer mifandraika amin'ny niche anao
Alarobia, Jona 22, 2022 Alarobia, Jona 29, 2022 Elizabeth Shydlovich
Miova tsy tapaka izao tontolo izao ary miova miaraka amin'izany ny varotra. Ho an'ny mpivarotra, vola roa lany io fivoarana io. Amin'ny lafiny iray, mampientam-po ny manaraka hatrany fironana marketing ary mitondra hevitra vaovao.
Amin'ny lafiny iray, rehefa mihamitombo hatrany ny sehatry ny varotra, lasa sahirana ny mpivarotra - mila mikarakara paikady ara-barotra, votoaty, SEO, gazety, media sosialy, mamorona fanentanana famoronana, sns. Soa ihany fa manana fitaovana ara-barotra izahay hanampy anay, hitsitsy fotoana, ary hamakafaka ny angona izay tsy ho vitanay raha tsy izany.
Ny marketing influencer dia tsy fironana vaovao - amin'izao fotoana izao, fomba iray azo antoka sy azo itokisana hampiakarana ny anao fanentanana marika ary mitondra mpanjifa vaovao.
Ny 75% amin'ny marika dia nikasa hanokana teti-bola mitokana ho an'ny marketing influencer amin'ny 2021. Raha misy, ny 5 taona farany dia nahatonga ny marketing influencer ho azo ampiasaina kokoa ho an'ny marika kely kokoa, saingy amin'ny fotoana iray dia sarotra sy mora kokoa.
Fandraisana Marketing Influencer
Amin'izao fotoana izao, saika ny vokatra na serivisy rehetra dia azo fampiroboroboana amin'ny marketing influencer saingy miatrika fanamby vaovao miaraka amin'ny influencers ny mpivarotra. Te-hahafantatra ny fomba hahitana ilay mpamorona tonga lafatra amin'ny marikany izy ireo, ny fomba hijerena raha mividy mpanaraka sy firotsahana izy ireo, ary ahoana no hahazoana antoka fa hahomby ny fampielezan-keviny.
Soa ihany fa misy fitaovana ara-barotra izay manampy anao hahita ny influencer tsara indrindra ho an'ny niche sy ny sarin'ny marika, manombatombana izay tratra azonao antenaina amin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo, ary mamakafaka ny fanentanana influencer anao rehefa vita izany.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia handrakotra fitaovana 7 ho an'ny teti-bola sy tanjona samihafa isika. Azonao atao ny misafidy izay mety aminao indrindra ary mitahiry fotoana amin'ny fikarohana momba ny marketing influencer.
Awario dia ahafahan'ny orinasa sy mpivarotra mahita micro- sy macro-influencers ao amin'ny akaninao.
Awario dia fitaovana tsara hitadiavana karazana influencers rehetra, na lehibe na kely, niche na mahazatra. Ny tombony dia ny fahafaha-manao - tsy manana sokajy efa voatendry ianao izay tadiavinao ho an'ny influencers toy ny fitaovana marketing influencer hafa.
Fa kosa, mamorona fanairana fanaraha-maso amin'ny media sosialy ianao izay ahafahanao mitady mpikatroka manonona teny fanalahidy manokana (na mampiasa azy ireo amin'ny bios, sns.). Ireo teny fanalahidy ireo dia mety ho marika manokana ao amin'ny niche anao, ny mpifaninana mivantana aminao, ny karazana vokatra vokarinao, ary ny teny mifandraika amin'ny indostria - ny fetra dia ny eritreritrao.
Makà fotoana kely hieritreretana momba ny karazana influencer tianao ho hita sy ny fehezanteny hampiasainy amin'ny lohateny sy lahatsoratra.
Avy eo i Awario dia manangona ny resadresaka an-tserasera izay manonona ireo teny fanalahidy ireo ary mandinika azy ireo ho an'ny fahatratrarana, fihetseham-po ary andian-dahatsary demografika sy ara-tsaina. Nampidirina ao amin'ny tatitry ny Influencers ireo mpanoratra izay nanana fahafahana be indrindra tamin'ny lahatsorany.
Ny tatitra dia mampiseho anao ireo influencers rava amin'ny sehatra (Twitter, YouTube, sy ny sisa) miaraka amin'ny tratrany, ny isan'ny fotoana nanononany ny teny fanalahidyo, ary ny fihetseham-po nasehony. Azonao atao ny mikaroka ity lisitra ity ary mahita mpamorona mety. Ny tatitra dia azo zaraina mora foana amin'ny alàlan'ny rahona na PDF miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao sy ireo mpandray anjara.
Raha mitady influencer manana tanjona manokana ianao (ohatra, mpanjohy 100-150 arivo), azonao atao ny mahita azy ireo ao amin'ny Mention Feed. Misy tontonana sivana mety ahafahanao manivana kaonty misy mpanaraka maromaro. Azonao atao ny manivana bebe kokoa ity angona ity araka ny fihetseham-po, ny firenena niaviany, sy ny maro hafa.
Tokony holazaina fa tsy fitaovana marketing influencer fotsiny i Awario ary manome fomba fijery ara-barotra mahasoa ho an'ny famakafakana ny mpifaninana, ny drafitry ny fampielezan-kevitra ary ny fanaraha-maso ny media sosialy.
Tokony hanandrana Awario ianao raha:
Manana fepetra manokana ho an'ny influencers ao an-tsainao ianao
Te-hikendry tamin'ny laser ny fanentanana influencer-nao ianao
Mila fitaovana misy tanjona maro ianao izay afaka mandrakotra mihoatra noho ny marketing influencer
Awario dia manolotra andrana maimaim-poana 7 andro ahafahanao mitsapa ny Tatitra ny influencers.
Midira ho an'i Awario
Ny vidiny dia manomboka amin'ny 39$ isam-bolana (24$ raha mividy drafitra maharitra iray taona ianao) ary miankina amin'ny habetsahan'ny resaka azon'ilay fitaovana angonina sy anadihadiana.
Upfluence no angon-drakitra influencer tsara indrindra ho an'ny marika E-varotra. Ny ankamaroan'ny fitaovana marketing influencer dia mifototra amin'ny angon-drakitra - katalaogin'ny influencer raha tianao. Ny fandrosoana no fivoarana voajanahary amin'ity hevitra ity. Izy io dia angon-drakitra an-tserasera be dia be an'ny influencers izay havaozina tsy tapaka sy itarina amin'ny alàlan'ny algorithm izay mamakafaka ny mombamomba ny mpamorona amin'ny sehatra media sosialy marobe.
Indray mandeha ianao dia mampiasa teny fanalahidy hitadiavana mpamorona, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia tsy manomboka fikarohana vaovao hatrany am-boalohany ilay fitaovana. Fa kosa, mamakivaky ny angon-drakitra misy azy izy mba hahitana ny mombamomba misy marika mifandraika amin'ny tenimiafinao. Ny mampiavaka ny Upfluence amin'ny angon-drakitra influencer hafa dia ny fahafahana mametraka lanja amin'ny teny fanalahidy samihafa.
Ohatra, mitady mpanentana fomba fiaina ianao hampiroborobo ny kojakoja an-trano vita amin'ny etika. Afaka manao haingo an-trano ary drafitra anatiny ny teny fototra fototra ary misafidy etika, fandraharahana madinika, fananan’ny vehivavy ho teny fanalahidy faharoa. Izy ireo dia hifanaraka amin'ny fikarohanao, fa tsy handray anjara lehibe toy ny teny fototra fototra.
Raha Instagram ny sehatra lehibe anananao, dia azonao atao ny manivana ireo mpikatroka mifototra amin'ny demografika toy ny taona, ny lahy sy ny vavy ary ny toerana misy anao (raha manome alalana ny fidirana amin'ity data ity ireo mpikatroka nasongadina).
Ny fivarotana e-varotra dia afaka mahazo lanja bebe kokoa amin'ny fitaovana fitadiavana influencers amin'ny mpanjifany efa misy. Ny upfluence dia azo ampidirina amin'ny CMR sy ny tranokalanao mba hamantarana ireo mpanjifa manana mpanaraka media sosialy marobe. Tsarovy fa ny mpanjifanao no mpivarotra tsara indrindra ho anao, ary raha manana mpihaino azy manokana izy ireo dia ho tsy miraharaha azy ireo.
Ho fanampin'ny fikarohana influencer, Upfluence dia manome angon-drakitra azo zahana izay ahafahanao mandamina ireo influencer mahaliana. Azonao atao ny manampy saha sy mamela marika hahitanao olona iarahanao mora kokoa. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mampifandray ny mailaka rehetra misy eo aminao sy ny influencer mba hahazoana reference mora. Misy ihany koa ny singa fitantanana tsingerin'ny fiainana izay mampiseho anao ny fandrosoanao ho an'ny mpikatroka tsirairay—izay ifampiraharahanao, izay andrasanao hamita votoaty, iza no miandry ny fandoavam-bola, ireo karazana zavatra ireo.
Amin'ny ankapobeny, ny Upfluence dia mifantoka amin'ny fanamorana ny fifandraisana organika maharitra eo amin'ny marika sy ny influencers, noho izany ny fifantohan'izy ireo dia tsy ny fitadiavana influencer fotsiny fa ny fifandraisana sy ny fifandraisana ihany koa.
Tokony hanandrana ny Upfluence ianao raha:
Miaraha miasa amin'ny e-varotra sy fivarotana an-tserasera
Mila sehatra marketing influencer ho an'ny fikarohana sy fitantanana
Tanjona ny hanorina fifandraisana maharitra amin'ny influencers
Upfluence dia sehatra Enterprise-level. Izy io dia manome ny vidiny marina amin'ny fifandraisana rehefa azon'ny mpitantana azy ireo ny zavatra ilainao. Misy drafitra efa napetraka telo izay tsy mitovy amin'ny isan'ny mpampiasa sy ny fidirana amin'ny tatitra sy ny fampidirana.
Manomboka amin'ny Upfluence
Misy fanitarana Chrome maimaim-poana handinihana haingana ny mombamomba ny influencer.
Na dia tsy fitaovana ara-barotra amin'ny influencer fotsiny aza ny BuzzSumo, dia ahafahan'ny mpampiasa azy mahita ny votoaty an-tserasera malaza indrindra ary mamakafaka ireo mpanoratra ao ambadik'izany. Noho izany, mety ho fomba mahagaga hitadiavana influencers izay mahazo firotsahana be dia be ny votoatiny ary noho izany ireo manana mpihaino tsy mivadika sy mavitrika.
Ny fikarohana ao amin'ny BuzzSumo dia mifototra amin'ny teny fanalahidy ihany koa. Azonao atao ihany koa ny misafidy sivana izay mihatra amin'ny fikarohanao, anisan'izany ny daty, fiteny, firenena, sns. Ny valiny dia ho laharam-pahamehana amin'ny isan'ny fifaneraserana naterak'izy ireo - tia, mizara ary fanehoan-kevitra. Azonao atao ny mikaroka ireo mpanoratra ireo lahatsoratra ireo mba hahafantarana hoe iza amin'izy ireo no lahatsoratra viraliny avy amin'ireo mpampiasa media sosialy mahazatra, ary izay noforonin'ny influencers, ary manatona ity farany.
Ny endri-javatra Trending Now an'i Buzsummo dia fitaovana tena ilaina ihany koa izay ahafahanao mijanona eo ambonin'ny fironana farany amin'ny indostriantsika. Ny hany tokony hataonao dia ny mamorona lohahevitra preset mamaritra ny niche anao ary ny rindrambaiko dia hampiseho aminao ny votoaty malaza amin'ity niche ity. Endri-javatra tsara hahitana mpamorona vao misondrotra eo amin'ny sehatra misy anao.
Ny sehatra ihany koa dia manome fikarohana Influencer mivantana, na dia misy fanodinkodinana kely aza. Ny endri-tsoratra ambony indrindra an'ny BuzzSumo dia mizara ireo mpikatroka amin'ireto sokajy manaraka ireto:
ny mpanao gazety
Olona tsy tapaka
Afaka misafidy sokajy maromaro hokarohana ianao. Ny fikarohana indray dia miankina amin'ny teny fanalahidy mifandraika amin'ny niche omenao. Ny valiny dia manome fampahalalana be dia be momba ny mpanoratra ao anatin'izany ny isan'ny mpanaraka azy amin'ny sehatra, ny tranokalany (raha manana iray izy ireo) sy ny fahefan'ny sehatra, ny maha-zava-dehibe azy ary ny maro hafa.
Tokony hanandrana BuzzSumo ianao raha:
Mitady bilaogera ianao
Misy drafitra maimaim-poana izay manome anao fikarohana 10 isam-bolana, na izany aza, ny fikarohana Top Authors dia tsy tafiditra. Azonao atao koa ny manandrana maimaim-poana ny drafitra rehetra mandritra ny 30 andro.
Manomboha andrana maimaim-poana 30 andro an'ny BuzzSumo
Ny vidiny dia manomboka amin'ny $99 isam-bolana ary miovaova arakaraka ny endri-javatra misy. Ny endri-javatra Top Authors dia tsy misy afa-tsy amin'ny drafitra lehibe mivarotra $299 isam-bolana.
Heepsy dia ahafahanao mikaroka sy mikaroka ireo mpikatroka Instagram, YouTube, TikTok ary Twitch an-tapitrisany. Ny sivana fikarohana an'i Heepsy dia manampy anao hahita tsara izay tadiavinao, ary ny tatitra momba ny influencer dia manome anao ny metrika ilainao handraisana fanapahan-kevitra. Ny sehatra dia misy ny metrika fampisehoana votoaty sy ny fanaraha-maso ny mpanaraka sandoka.
Tokony hanandrana Heepsy ianao raha:
Ny votoatinao dia hita maso ary mitady mpamorona video ianao.
Te-hanara-maso ny firotsahana amin'ny atiny sy ny lohahevitra fototra ianao.
Te hitaona mpanaraka ao amin'ny Instagram, YouTube, TikTok ary Twitch ianao.
Ny vidiny dia manomboka amin'ny $49 isam-bolana miaraka amin'ny fahafaha-manao voafetra. Manolotra fonosana fandraharahana sy volamena koa izy ireo.
Hunter.io mahita adiresy mailaka ho anao. Afaka manao fikarohana 100 isam-bolana amin'ny drafitra maimaim-poana ianao. Mampiditra anaran-tsehatra ao amin'ny motera fikarohana azy ireo ianao ary Hunter.io dia hanao izay fara heriny hahitana ny adiresy mailaka mifandray amin'io sehatra io.
Hunter.io dia afaka manampy manokana amin'ny fitadiavana ny adiresin'ny mailaka an'ny olona mety ho sarobidy amin'ny fikambananao. Ohatra, ao anatin'ny fanentanana influencer anao, azonao atao ny mangataka lahatsoratra bilaogy vahiny amin'ny bilaogy manan-kery ao amin'ny niche anao. Mety ho sarotra indraindray ny mahita ny adiresy mailaka marina rehefa mila manatona azy ireo ianao miaraka amin'ny fangatahanao. Azonao atao ny mampiditra ny anaran'ny olona iray sy ny tranokalan'ny orinasa ao amin'ny Hunter.io, ary hisy adiresy mailaka atolotra azy.
Raha mihevitra ianao fa manana adiresy mailaka manan-kery harahina nefa tsy azonao antoka dia azonao atao ny mampiditra ny adiresy ao amin'ny Hunter.io, ary izany no hamaritra raha manan-kery ny adiresy mailaka.
Azonao atao koa ny mampiasa Hunter.io ho plug-in. Amin'ity tranga ity, rehefa mandeha amin'ny tranokala manokana ianao dia azonao atao ny manindry ny kisary Hunter.io ao amin'ny navigateur anao ary hahita adiresy mailaka manan-kery mipetaka amin'io sehatra io.
Tokony hanandrana Hunter.io ianao raha:
Efa manana lisitry ny mpanaraka tianao hotratrarina ianao
Ao anatin'ny dingan'ny famoronana angon-drakitra manokana momba ny influencers ao amin'ny niche anao ianao
Ny dikan-teny maimaim-poana dia manome anao fikarohana 25 isam-bolana.
Mitadiava adiresy mailaka miaraka amin'i Hunter
Ny drafitra karama dia manomboka amin'ny 49 euros ary ahitana fikarohana bebe kokoa sy endri-javatra Premium toy ny famakafakana bebe kokoa sy fampidinana CSV.
Na dia mamela anao hikaroka ny mpihaino anao koa aza ny sasany amin'ireo fitaovana amin'ity lisitra ity, dia miankina amin'ny fikarohana ny mpihaino i Sparktoro mba hahitana ireo mpikatroka mifandraika amin'izany. Midika izany fa mahita mpihaino voalohany ianao amin'ny alàlan'ny Sparktoro ary avy eo dia ampiasao izany hamantarana ny fomba hahatratrarana azy ireo.
Rehefa manokatra ilay fitaovana ianao dia afaka mahita mpihaino amin'ny fanoratana:
izay resahin’izy ireo matetika;
inona no teny ampiasainy ao amin'ny mombamomba azy;
inona ny tranonkala tsidihiny;
ary ny tenifototra ampiasainy.
Tadidio fa tsy maintsy mamaly ny iray amin'ireo fanontaniana ireo ianao mba hahitana ny mpihaino anao. Ny ambiny amin'izy ireo dia hovaliana amin'ny valin'ny Sparktoro - miaraka amin'ny kaonty media sosialy arahin'ny mpihaino anao.
Raha mikasa ny hampiasa an'i Sparktoro ianao amin'ny fikarohana momba ny influencer, ny tena ifantohanao dia ny vokatra izay mampiseho ny zavatra arahin'ny mpihaino anao, ny fitsidihan'ny mpihaino anao ary ny fiarahany. Nozarain'i Sparktoro ho sokajy efatra ireto vokatra ireto:
Nanaraka ny kaonty media sosialy ny ankamaroany
Kaonty ara-tsosialy manana tanjona kely kokoa nefa mandray anjara betsaka amin'ny mpihaino anao
Tranonkala be mpitsidika indrindra
Tranonkala tsy dia misy fifamoivoizana loatra nefa misy fandraisana anjara betsaka
Ity lisitra ity dia manampy anao hahita ny olona malaza indrindra ao amin'ity akany ity fa koa ny tena mifandray amin'ny olona, ​​mampiseho anao micro-influencers manana mpanaraka mavitrika sy mavitrika.
Asehon'i Sparktoro anao koa izay votoaty lanin'ny mpihaino anao amin'ny Internet: inona ny podcast henoiny, inona ny kaonty an-gazety arahin'izy ireo, ary ny fantsona YouTube jereny.
Tokony hanandrana an'i Sparktoro ianao raha:
Tsy mbola fantatrao hoe iza no mpihaino kendrenao na te hahita vaovao
Te-hahatakatra ny fomba hanatratrarana ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny atiny an-tserasera ianao
Ny drafitra maimaim-poana dia manome fikarohana dimy isam-bolana, na izany aza, ny drafitra karama dia manampy kaonty sy fantsona manan-kery kokoa hanatrarana ny mpihaino anao. Manomboka amin'ny $38 ny vidiny.
Followerwonk dia fitaovana Twitter izay manome famakafakana mpihaino isan-karazany ho an'ny sehatra. Manolotra endri-pikarohana influencer ihany koa izy io izay mifantoka amin'ny lojika amin'ny influencers Twitter.
Azonao atao ny mampiasa azy io handinihana lalina ny analyse Twitter anao. Azonao atao ny mikaroka bios Twitter, mifandray amin'ny influencers na mpankafy, ary manapaka azy ireo amin'ny toerana, fahefana, isan'ny mpanaraka, sns. Manome ny mpampiasa Twitter tsirairay ny laharana ara-tsosialy mifototra amin'ny isan'ny mpanaraka sy ny tahan'ny fandraisana anjara ananany. Azonao atao ny mampiasa ireto isa ireto mba hamaritana hoe manao ahoana ny influencer malaza.
Na izany aza, ny fikarohana dia tsy voafetra amin'ny kaonty manokana. Azonao atao ny mikaroka teny fototra (ny marikao, ohatra), ary ny Followerwonk dia hamorona lisitry ny kaonty Twitter rehetra misy an'io teny io ao amin'ny bios-ny.
Tokony hanandrana ny Followerwonk ianao raha:
Ny sehatra lehibe ho an'ny mpihaino kendrenao dia Twitter
Misoratra anarana amin'ny Followerwonk maimaimpoana
Maimaim-poana ny fitaovana. Misy dikan-karama misy endri-javatra fanampiny, manomboka amin'ny $29 ny vidiny.
Raha te hifantoka amin'ny sehatra mahazatra kokoa ho an'ny mpamorona an-tserasera ianao dia fitaovana ho anao ity.
Miaraka amin'ny fahafahana mikaroka amin'ny Instagram sy YouTube miaraka amin'ny teny fanalahidy, NinjaOutreach dia hahita mpikatroka manana tsindry avo indrindra, fifandraisana ary fifamoivoizana.
Sahala amin'ny Upfluence, NinjaOutreach dia miasa voalohany indrindra ho toy ny angon-drakitra momba ny mpikatroka YouTube sy Instagram. Izy io dia manana mombamomba ny media sosialy sy bilaogera maherin'ny 78 tapitrisa azonao ifandraisana ary manampy amin'ny fanaovana automatique ny fanaparitahana anao mba hanamafisana ny fiaraha-miasanao amin'ny influencers.
Ny sehatra dia mahatonga ny fizotran'ny fanentanana ho mora indrindra satria manome ny fifandraisana amin'ny mailaka ho an'ny influencers rehetra ao amin'ny angon-drakitra ary ahafahanao manangana CRM anao manokana. Azonao atao ny mizara ny fidirana amin'ny ekipanao ary manara-maso ny tantaran'ny resaka mba hahazoana antoka fa ho fantatry ny rehetra.
Tokony hanandrana NinjaOutreach ianao raha:
Mila ny sehatra izay hanamora ny fikarohana sy ny ampahany amin'ny marketing influencer ianao
Mifantoka amin'ny fanentanana influencer-nao amin'ny YouTube sy Instagram ianao
Misoratra anarana ho an'ny NinjaOutreach
Misy andrana maimaim-poana azo (mila fampahalalana momba ny karatra). Ny drafitra roa dia mitentina $389 sy $649 isam-bolana ary tsy mitovy amin'ny isan'ny mailaka misy, kaontin'ny ekipa ary fifandraisana.
Manomboka amin'ny Influencer Outreach anio
Araka ny hitanao, ny fitaovana marketing influencer dia manolotra karazany lehibe ho an'ny mpivarotra rehetra, na inona na inona teti-bola na tanjonao. Mamporisika anao aho hanandrana ny kinova maimaim-poana amin'ny fitaovana izay nanintona ny masonao ary hijery izay azony atao amin'ny marikao. Farafaharatsiny, azonao atao ny manomboka manaraka ireo influencers hitanao mba hahafahanao manomboka mifandray amin'izy ireo, mahatakatra ny niche sy ny fifantohany, ary mety hanatona azy ireo amin'ny fampiroboroboana ny vokatrao sy ny serivisinao.
Disclosure: Martech Zone dia nanampy rohy mifandray amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: awariobuzzsumoinfluencers e-varotrafacebook influencersmitadiava bilaogeramahita marikamahita orinasamitadiava adiresy mailakamahita ny influencersmahita ny influencers instagrammitadiava mpanao gazetymitadiava mpanao gazetymitadiava olona manan-kery TikTokmahita influencers twitchmpihazahunter.iohery miasa manginamarketing marketingfitaovana fikarohana momba ny marketing influencerFikarohana Influencerfitaovana fikarohana influencer marketinginfluencer amin'ny instagrammicro-influencernano-influencerireo mpamaky media sosialympanentana tiktoktwitchinfluencerstwitter influencersfiakaranainfluencers youtube
Elizabeth Shydlovich dia lohan'ny marketing inbound ao Awario, fitaovana SaaS. Manam-pahaizana momba ny varotra izy izay manampy ny orinasa rindrambaiko hampiasa paikady marketing hahitana mpanjifa, hitondra fiara fifamoivoizana, hiteraka fahatsiarovan-tena ary hampitombo ny varotra.
Lesona 5 nianarana avy amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa 30 tapitrisa mahery tamin'ny taona 2021
Ahoana no hitondrana fifamoivoizana bebe kokoa sy fiovam-po avy amin'ny media sosialy